Akhri: RW Cabdiweli oo ku gacanseyray si casilaad ay usoo jeediyeen 14 wasiir – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: RW Cabdiweli oo ku gacanseyray si casilaad ay usoo jeediyeen 14 wasiir
17th November 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: R/wasaaraha Soomaaiya, C/weli Sheekh Axmed Maxamed ayaa ka hadlay soo jeedin uga timid 14 ka mid ah xubnaha Golihiisa wasiirada, kuwaasoo kula taliyey inuu xilka iska casilo.
R/wasaaraha ayaa ugu baaqay wasiirada iney shaqadooda u gutaan si waafaqsan sharciga, taasoo muujineysa inuusan aqbalin baaqii ay u jeediyeen.
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa nasiib darro ku tilmaamay in Wasiir ka tirsan xukuumadda oo sheegay in 14 wasiir ay Ra’iisul Wasaaraha u gudbiyeen warqad ay kaga dalbanayaan inuu is casilo, waxaana xafiisku sheegay in warqadaas aysan soo gaarin.
Deg Deg:Shariif Xasan sheekh Aadan oo loo doortay Madaxweynaha Koonfur galbeed.